पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरी बढ्यो ! - Everest Dainik - News from Nepal
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरी बढ्यो !
स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार, पेट्रोलमा २ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलमा ३ रुपैयाँ बढाइएको निगमका निर्देशक एवं प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए ।
याे पनि पढ्नुस पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १४४ रुपैयाँ !
यससँगै अब पेट्रोलको नयाँ मूल्य प्रतिलिटर १ सय १४ तथा डिजेल र मट्टितेलको १ सय १ कायम भएको छ । खाना पकाउने एलपीजी ग्यास र हवाइ इन्धनको मूल्य भने अहिलेलाई यथावत राखिएको छ।
ट्याग्स: Petrol price hike